သတ္တမ | Myanmar Mp3 Album
Home / သတ္တမ
Author Archives: သတ္တမ
ကျေးဇူးတင်ရှိခြင်း …. ကျွန်တော် ဒီသီချင်းတွေကို ၀က်ဆိုဒ်တခု ကနေရတာပါ .. ၀က်ဆိုဒ်လိပ်စာကိုတော့ မမှတ်မိတော့ပါဘူး … ၂၀၀၈ – ၂၀၀၉ လောက်က ဆိုတော့ .. အခုလိုပြန်လည်မျှဝေခွင့် ရအောင် တင်ပေးတဲ့ အဲ့ဒီ ၀က်ဆိုဒ် ပိုင်ရှင်ကိုလဲ ဒီနေရာက နေ ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် လို့ပြောကြားရင်း ….
February 8, 2011 သတ္တမ Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums5Comments
MMA မှာ တင်ပြီးသား မရှိသေးတဲ့ ခေတ်ဟောင်းဓါတ်ပြား သီချင်းတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်းစီ တင်ပေးသွားပါ့မယ် … အခုပထမဆုံး အနေနဲ့ မောင်မောင်ညွန့် ရဲ့ ၅၂၈ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ စတင်ပေးလိုက်ပါတယ် …. နောက် အချိန်ရ ရင် ရသလို ဒီခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ တင်ပေးသွားပါ့မယ် ။ ၅၂၈ – မောင်မောင်ညွန့်
February 25, 2009 သတ္တမ (ခေတ်ဟောင်း) မောင်မောင်ညွန့် အဆိုတော် (ကျား) Myanmar Artist Myanmar Oldie Albums 14 Comments
Yatha – UnderGround
၁ ။ မနိုင်ဘူး – Yatha ၂ ။ မူးယစ်ဆေး နဲ့ လူဆိုး – Yatha & Htein Winn ၃ ။ စကားပြောတဲ့ လက်များ – Yatha ၄ ။ အဲ့ဒါ ……….. – Yatha
February 25, 2009 သတ္တမ အဆိုတော် (ကျား) ရသ Myanmar Artist Unreleased Albums2Comments
၀ါဆို – N – Zai
February 25, 2009 သတ္တမ Myanmar Artist Unreleased Albums4Comments
ဈေးမဆစ်နဲ့ – ရသ
February 25, 2009 သတ္တမ အဆိုတော် (ကျား) ရသ Myanmar Artist Unreleased Albums4Comments
Ma Htoo Pal Yin Kwal – Guardian Of God (GOG)
Music : Kyar Ye`, Be-Boi Lyrics ; Kyar Ye` , Be-Boi , YoungstaZ
February 6, 2009 သတ္တမ အဆိုတော် (ကျား) Myanmar Artist Unreleased Albums Leaveacomment
N Zai – Ma
N Zai ရဲ့ မ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်ပါ … title မသိလို့ မ လို့ပဲ တပ်ပေးလိုက်ပါတယ် …. တော်တော်လေး မိုက်ပါတယ် …. စာသားလေးတွေက …. အားလုံးလဲ နှစ်သက်မယ်လို့ ထင်ပါတယ် ….
February 5, 2009 သတ္တမ Unreleased Albums4Comments
Sa Gar Pyaw Tat Music – Wunna, ZMA, N Phyo, Oro
February 2, 2009 သတ္တမ Unreleased Albums 1 Comment
Yatha ( UnderGroundSamples)
01. Lil bro (Yatha & Kyat Pha) 02. Taw P Pop (Yatha & Bigg Y) 03. Lan Kyaung (Yatha) 04. Mhar Thwar Mal (Yatha) 05. Two Friend Story (Yatha & Ye’ lay) 06. War Dog (Yatha) 07. South Foul Channel (Yatha)
February 2, 2009 သတ္တမ အဆိုတော် (ကျား) ရသ Unreleased Albums 20 Comments
Tiny Twist ( Soe Phyo & BobbySoxer )
February 2, 2009 သတ္တမ Unreleased Albums Leaveacomment